I-DEADPOOL 3 YONKE INKCUKACHA KUNYE NABAPHANGI OMELE UYAZI - IIMUVI
Amagama ayasasazeka, kwaye ngoku wonke umntu unokulinda ngokusesikweni ukubuya ebekulindelwe ngumntu wonke. Njengoko
Amagama ayasasazeka, kwaye ngoku wonke umntu unokulinda ngokusesikweni ukubuya ebekulindelwe ngumntu wonke.
Njengoko bonke bevuma ukuba i-Deadpool ifumene umtsalane wokuthandwa, kwaye I-Deadpool 2 (2018) yajika yaba yeyona bhanya-bhanya ilinganiswe R ephezulu ngalo lonke ixesha.
Kodwa akukho mntu wakha wayibona isiza ukuba i-Deadpool 3 iza kuhamba ngendlela yayo kwiscreen. Ke funda ukuba le yenye yeefilimu zakho ozithandayo ngalo lonke ixesha.
Kuba iDisney idityaniswe ne-FOX kutshanje, bekukho inkxalabo malunga nokubuya kukaRyan Reynolds njenge-Deadpool, kodwa isavenge sesithathu ngokungathandabuzekiyo siya kuba.
URyan Reynolds wahlekisa abalandeli ngokuthumela ifoto ukuqinisekisa intlanganiso yakhe yamva nje noMarvel, eyayililizwi elincinci lokuba angaphicothwa ukudlala indima ka-Anthony Stark.
Iingqikelelo azange zime nje apho.
UReynolds waxelwa ukuba angene kwiMarvel ngeThor kunye neSigcawu-sendoda ekhokelele kubalandeli.
Lonke uhlaziyo lwamva nje kwi-Deadpool 3
Ababhali badityaniswa I-Deadpool 3 usindise abalandeli ukuba bancwina xa besithi uMerc ngomlomo ombi uya kuqhubeka nelifa lakhe.
Ukuba iyenzeka, imibuzo esengqiqweni kodwa engaqondakaliyo malunga nomhla wokukhutshwa, isamente, kunye nesiqwenga sebali qala ujikeleze ezingqondweni zabalandeli. Umhla wokukhutshwa awukazukuchazwa njengoko kungekho hlaziyo kule parameter.
URyan Reynolds ngokwakhe akazange athethe naliphi na igama malunga naloo nto.
Ababhali uRhett Reese kunye noPaul Wernick, abadibeneyo kule filimu, babelana ngeengcinga zabo. Baqinisekisa wonke umntu ukuba ifilimu iyakwenzeka.
Kwaye balinde umqondiso oluhlaza ovela kuMarvel ukuze baqhubeke nale franchisee edumileyo yeR. Kwaye nomlawuli, uDavid Leitch. Kusekho uqikelelo lokuba i-Deadpool 3 inokuvela kwiscreen kwinqanaba lesi-5 kuthotho lweMarvel, ebonisa ukuba abalandeli banokuya kwifilimu ngo-2022.
I-anime iyafana nendoda enye yenqindi
Indawo enokubakho kwi-Deadpool 3
Xa kuziwa ekuphoseni, kukho umlinganiswa omnye esiqinisekile ngaye kwaye sonwabile ngokulinganayo ukubukela. Kwaye ayikho enye ngaphandle kukaWade Wilson odlalwa nguRyan Reynolds.
Wayekhe wabelana ngothando ngalomlingiswa, Yindima endiziva ukuba ndinelungelo elikhulu kuyo kuyo yonke imisebenzi yam. Ndiziva ngathi ndizalelwe yona. Ndiyayithanda i-Deadpool. Ngummangaliso wemaski.
Ucacisa kudliwanondlebe noLorraine Kelly. Azikho ezinye izibhengezo malunga nabadlali bonke abakwi-Intanethi okwangoku. Nangona uReynolds wacebisa uHugh Jackman's Wolverine ukuphindaphinda kule filimu ngaphandle komhlala-phantsi womlingiswa.
Kubonakala kungonwabanga malunga nokuqonda ukuba yeyiphi indawo yeplanti yesithathu ye-Deadpool. Kodwa uReynolds uxelele Ukwahluka ukuba ifilimu iya kuba kwicala elahlukileyo. Ingaba ngumkhosi we-X, okanye abaphindezeli bapakishe isimanga? Lixesha kuphela eliza kuxela.
Ewe, ngumcimbi wexesha kude kube kukhutshwa ifilimu ezayo. Njengabalandeli abaninzi banokuziva, ukulinda le movie ngokungathandabuzekiyo kunzima. Kodwa ukulinda kuya kuba kufanelekile! Ukuza kuthi ga ngoku uhlale ukhuselekile kwaye uhlale ekhaya!
nini ixesha elitsha lesipili esimnyama
akukho mdlalo akukho xesha lobomi 1
dr ilitye english cast
Ngaba kuya kubakho omnye umgculeli?
umzingeli x umzingeli ukuqhubeka